जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ ! – Life Nepali
जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ ! अवस्य पढ्नुहोला ,म सुतेको थिए , मेरी श्रीमतिले मेरो टाउको मालिस गरीरहेकी थिइन ,म बिस्तारै – बिस्तारै निदाए जागेपछी उनले निधारमा भिक्स लगाइदिइन मेरो आँखा खुल्नासाथ उनले सोधिन केही आराम मिल्यो कि नाइ मैले मिल्यो भनेर टाउको हल्लाए फेरि उनले सोधिन कि , खाना खानुहुन्छ मलाई भोक लागेको थियो मैले भने खान्छु ” *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous रा’ती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले क’ल्पना पनि ग’रिनन् यस्तो होला भन्ने !
Next यी राशी भएका पुरुषहरूले पाउँछन् सुन्दर र गुणवति श्रीमती !